ကမ္ဘာဘောလုံးလောကကို တုန်လှုပ်စေခဲ့တဲ့ “ဘာစီလိုနာကနေ ထွက်ခွာဖို့ မက်ဆီတောင်းဆိုလိုက်ပြီ” ဆိုသည့် စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဘောလုံးပရိသတ်တွေအားလုံး ဂယက်ရိုက်ကုန်ကြတယ်။ အားကစားမီဒီယာတွေအားလုံး အလုပ်တွေရှုပ်ကုန်ကြတယ်။ မက်ဆီတစ်ယောက် ဘာစီလိုနာက ထွက်ရင် ဘယ်အသင်းကို ပြောင်းမှာလဲ ? ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ? အားလုံးက စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ ဘာစီလိုနာကို အသက် ၁၄ နှစ်ကတည်းက ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ကတ်တလန်မြေကလွဲလို့ တခြားဘယ်အသင်းကိုမှ ပြောင်းဖို့ စိတ်တောင်မကူးဘူးတဲ့ မက်ဆီက အသင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
တကယ်လို့ မက်ဆီသာ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံး ပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့အသင်းကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဖြစ်တယ်လို့ Evening Standard သတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းမှ တပတ်ကို ပေါင် ၁သန်း နီးပါးခံစားခွင့်ရရှိထားပါတယ်။ ဘောလုံးလောကမှာ မက်ဆီ လက်ရှိရနေတဲ့ လစာကိုပေးနိုင်တဲ့အသင်းက လက်ချိုးရေတွက်လို့ရတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊ မန်ချက်စတာစီးတီး၊ PSG ဒီ(၃) သင်းကတော့ မက်ဆီတောင်းဆိုတဲ့ ပမာဏကု ိပေးချေနိုင်တဲ့ ဓနအင်အားရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ လောလောဆယ် ဒီ(၃) သင်းထဲမှာ ဂွာဒီယိုလာရဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ မက်ဆီကို ခေါ်နိုင်ချေအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်။
မက်ဆီဟာ ဂွာဒီယိုလာရဲ့ သင်ကြားပြသပေးမှုကြောင့် ထွန်းတောက်လာခဲ့တဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်သလို၊ ဆရာဟောင်းနဲ့ ပြန်လည်လက်တွဲရမဲ့ အခြေအနေကို မက်ဆီအနေနဲ့ ငြင်းဆန်စရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိပါဘူး။ ကလပ်အသင်းအောင်မြင်မှု သမိုင်းကြောင်းအရ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရနိုင်ပေမယ့် မန်ချက်စတာစီးတီးမှာ သုံးနိုင်စွဲနိုင် ငွေကြေး အင်အားရှိတယ်။ PSG မှာလည်း ဒီလိုအနေအထား ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ပြိုင်ပွဲအနေအထားက အများကြီးကွာဟတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံး ပရိသတ်တွေကို အများဆုံးစွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့ လိဂ်တစ်ခုဖြစ်သလို၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး လိဂ်တစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားဘူး။ စပိန်ကလာတဲ့ သတင်းတစ်ခုအရ မက်ဆီနဲ့ ဂွာဒီယိုလာတို့ဟာ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စအတွက် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ တောင်ဖော်ပြထားတယ်။
မက်ဆီအနေနဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီးကို ပြောင်းရွှေ့နိုင်ချေရှိတဲ့ နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ စီးတီးရဲ့ အမှုဆောင်ချုပ် ဖာရန်ဆိုရီယာနိုဟာ ယခင်က ဘာစီလိုနာ အသင်းမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပြီး မက်ဆီနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ မက်ဆီကို ခေါ်မယ်ဆိုရင် စီးတီးအနေနဲ့ နဂို အပြောင်းအရွှေ့ပုံစံကို ချိုးဖောက်ဖို့ ဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့် အသင်းဥက္ကဌ မူဘာရတ်ကတော့ နည်းပြလိုချင်တဲ့ မည်သည့်ကစားသမားကို မဆို ဝယ်ယူပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ ထုတ်ပြောထားတယ်။ “မန်နေဂျာလိုချင်နေတဲ့ တချို့ အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ဆိုက်ရောက်လာပြီဆိုရင် လက်နှေးနေလို့မရဘူး” လို့ လောလောလတ်လတ် အင်တာဗျူးမှာ မူဘာရတ်က ဖြေကြားထားပါတယ်။